How'd it happen and more reports?: *ခေါက်ဆွဲခြောက်နှင့်ကျန်းမာရေး*
instant Noodle ဆိုတဲ့ အဆင်သင့် ပြုတ်စားလို့ရတဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်တွေမှာလဲ အချိုမှုန့်တွေပါတတ်ပါတယ်ဗျ….
သတိထားပြီး ပါဝင်သော ပစ္စည်းအညွှန်းများ ဖတ်ပြီးမှ စားကျပါရန် သတိပေးလိုက်ပါတယ်…..
ခေါက်ဆွဲခြောက်၏သမိုင်းနှင့် ခေါက်ဆွဲခြောက်များနှင့် ကျန်းမာရေး
Instant noodle ခေါ် အလွယ်တကူပြုတ်၍ စားသုံးနိုင်သော ခေါက်ဆွဲခြောက်များကို ယခုအခါ တကမ္ဘာလုံးတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စားသုံးလျက်ရှိပါသည်။ ဈေးနှုန်းသင့်လျော်ခြင်း၊ ပင်ပင်ပင်ပန်းပန်း ချက်ပြုတ်ရန်မလိုခြင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းနှင့် လူမျိုးတိုင်းလိုလို လက်ခံစားသုံးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ၎င်းခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များမှာဈေးကွက်အတွင်း အတော်အသင့် နေရာယူလျက်ရှိနေသည်။ နာမည်အခေါ်အဝေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အရသာ ကွဲလွဲမှု ရှိသော်လည်း နိုင်ငံတော်တော်များများတွင် ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များကို လိုလိုလားလား လက်ခံစားသုံးလျက်ရှိပြီးအာရှ နိုင်ငံများတွင်သာမက အနောက်ဥရောပ နိုင်ငံများတွင်လည်း ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များ စားသုံးသည့်လူဦးရေမှာ မြင့်မားလျက်ရှိပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် တကမ္ဘာလုံးခေါက်ဆွဲခြောက်စားသုံးမှု၏ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး တစ်နှစ်စားသုံးမှုမှာ ခေါက်ဆွဲခြောက် ပါကင်ထုပ် ၄၅ ဘီလျီယံခန့်ရှိပါသည်။
တောင်ကိုရီးယားလူမျိုးများသည် ခေါက်ဆွဲခြောက်အများဆုံး စားသုံးသူများဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် လူတစ်ဦးချင်စီ စားသုံးမှုမှာ ပျမ်းမျှ ခေါက်ဆွဲထုပ် ပါကင်ထုတ်ကြီး ၆၉ ထုတ်ခန့်ရှိပါသည်။
Ando အား ၁၉၁၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၅)ရက်နေ့တွင် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းစု အနောက်တောင်ပိုင်း Chiayi မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် ချမ်းသာသော မျိုးနွယ်စုမှ ပေါက်ဖွားဆင်းသက်လာသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ Ando အား မွေးဖွားစဉ်က ထိုင်ဝမ်ကျွန်းစုသည် ဂျပန်အင်ပါယာ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော ကာလပင်ဖြစ်သည်။ Ando ၏ မိဘများသည် သူ ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သဖြင့် Ando သည် အဘိုးအဘွားများ၏ စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
Ando ၏ အဘိုးအဘွားများသည် ချည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံပိုင်ဆိုင်ပြီး Ando အသက် ၂၂ ရောက်သောအခါ ယင်းလုပ်ငန်းများအား Ando ကိုပင် ကြီးကြပ်လုပ်ကိုင်စေခဲ့သည်။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် Ando သည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပြီး Ritsumeikan တက္ကသိုလ်တွင် ပညာတက်ရောက်ဆည်းပူးခဲ့သည်။ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ်ပြီးသောအခါ Ando သည် ဂျပန်နိုင်ငံသား အဖြစ်ခံယူခဲ့ပြီး ထိုအချိန်က ဂျပန်နိုင်ငံသည် စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်မှုဒဏ်ကို ခံစားနေရချိန်ဖြစ်သည်။ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲကြောင့် ဂျပန် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းက ဂျပန်နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအား ဂျုံဖြူမှ ပြုလုပ်သော ပေါင်မုန့်များကိုပိုမိုဖြည့်စွက်စားသုံးရန် အကြံပြုခဲ့သည်။ ထိုအခါ Ando သည် ဂျုံမှပြုလုပ်တာချင်းအတူတူ ပေါင်မုန့်ထက် ခေါက်ဆွဲက ဂျပန်လူမျိုးများအတွက် စားသုံးဖို့ ပိုမိုသင့်လျော်မည်ဟု စူးစမ်းမိသည်။သို့သော်လည်း ထိုအချိန်က
ခေါက်ဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ အရေအတွက်မှာ အင်မတန်နည်းပါးနေသဖြင့် တိုင်းပြည်၏လိုအပ်ချက်ကို မဖြည့်ဆည်း နိုင်ခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့်Andoသည် မိမိကိုယ်ပိုင် စက်ရုံတည်ထောင်၍ ခေါက်ဆွဲထုတ်လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
“လူတွေမှာ စားစရာသာ အလုံအလောက်ရှိမယ်ဆိုရင် ဒီကမ္ဘာကြီးဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေပါလိမ့်မယ်” ဟု Ando သည် သိမြင်လာခဲ့သည်။ သူ့အသက် ၄၈ နှစ်သို့ရောက်သောအခါ chikin ramen ခေါ် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးခေါက်ဆွဲခြောက်ကိုဈေးကွက်အတွင်းဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့သည်။ Ramen ခေါက်ဆွဲအား ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ယနေ့တိုင်စားသုံးလျက်ရှိပြီး ၎င်းခေါက်ဆွဲ ထုတ်လုပ်သည့် Nissin Food Products ကုမ္ပဏီမှာလည်း နာမည်ကျော်ကြားလျက်ရှိပါသည်။ ထိုအချိန်က Ramen ခေါက်ဆွဲခြောက်တထုပ်၏ တန်ဖိုးမှာ ဂျပန်ယမ် ၃၅ ခန့်ရှိပြီး ထိုအချိန်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဂျပန်ရိုးရာ ခေါက်ဆွဲများထက် ၆ဆခန့်ဈေးကြီးမားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် Andoသည် အသင့်စား ခေါက်ဆွဲဘူး(Cup noodle ) များကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ထိုခေါက်ဆွဲဘူးများမှာ ဈေးကွက်တွင် လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ခေါက်ဆွဲထုပ် ဈေးနှုန်းများလည်း သက်သာလာခဲ့သည်။
ပြတိုက်အတွင်းတွင် Ramen ခေါက်ဆွဲထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်အသေးစားလေးအား ပြသလျက်ရှိပြီး အလည်အပတ်လာရောက်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်စမ်းသပ် စားသုံးနိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် ခေါက်ဆွဲခြောက်များတွင် monosodium glutamate ခေါ် ဟင်းချိုမှုန့်များ ပါဝင်နေနိုင်ပါသည်။ ၎င်း monosodium glutamate(MSG) သည် အမိုင်နို အက်ဆစ် အမျိုးအစား တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၄င်းသည် အစားအစာများကို အနံ့အရသာ ရှိစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် MSG အား ခေါက်ဆွဲခြောက် အရောအနှောမှုန့်များတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုလာကြပါသည်။ MSGကို မကြာခဏစားသုံးပါက လူကို စွဲစေတတ်သော သတ္တိရှိပါသည်။ ခေါက်ဆွဲခြောက်များတွင် MSG ပါဝင်သဖြင့် စားသုံးသူများအား ဥပဒ်ဖြစ်စေသည်၊ မဖြစ်စေသည်ကတော့ ယနေ့တိုင် အငြင်းပွါးဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန် အစားအစာနှင့် ဆေးဝါး အဖွဲ့အစည်း(Food and Drug Administration)၏ အဆိုပြုချက်အရ MSG ကိုအလွန်အကျွံစားသုံးမိပါက ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မျက်နှာသွေးရောင်ဖြန်းခြင်း၊ မျက်နှာ ၊လည်ပင်းနှင့် နောက်ကျော နေရာများတွင် ထုံကျင်ခြင်း၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊နှလုံးတုန်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း အန်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ အထက်ပါလက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရခြင်းကို တရုတ်စားသောက်ဆိုင်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါဒြပ်ပေါင်းစု (Chinese Restaurant Syndrome) ဟူ၍ ခေါ်ဆိုပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တရုတ်နိုင်ငံရှိ စားသောက်ဆိုင်များတွင် MSG အများအပြားအသုံးပြုပြီး တရုတ်အစားအစာများတွင်လည်း MSG လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုပါဝင်နေသောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ ရှိသူများအနေဖြင့် MSG အများအပြားစားသုံးမိပါက ရင်ကြပ်ရောဂါကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေနိုင်ပါသည်။
သို့သော် MSG သည် လူသားကို ကောင်းကျိုးပြုသော အချက်များလည်း ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် အစားအစာများကို အနံ့အရာသာနှင့် ပြည့်စုံစေနိုင်သောကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် အစားအသောက် ခံတွင်းပျက်နေသူများအတွက်အစာစားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ခေါက်ဆွဲခြောက်စားသုံးခြင်းကြောင့် MSG က လူသားအပေါ်ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေနိုင်မှုကိုမူ မည်သူမျှ တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးပေ။
ခေါက်ဆွဲခြောက်နှင့်ပတ်သတ်၍ နောက်ထပ် ရေပန်းစားနေသော အရာမှာ ကင်ဆာ ပင်ဖြစ်သည်။ခေါက်ဆွဲခြောက်များတွင် ခေါက်ဆွဲအမျှင်များပုံသဏ္ဍန်များ မပျက်ယွင်းစေရန်နှင့် ခေါက်ဆွဲခြောက်အား ပြုတ်လိုက်သောအခါ အမျှင်များ တစ်ခုနှင့် တစ်ခုမကပ်စေရန် ဖယောင်း (wax) များကို အသုံးပြုသည်ဟုဆိုပါသည်။ ထိုဖယောင်းများကိုအစာအိမ်က ချေဖျက်ရန် ၇၂ နာရီကြာမြင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခေါက်ဆွဲခြောက် ရေရှည်စားသုံးသူများအနေဖြင့် ကင်ဆာဖြစ်ဖို့အလားအလာများသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ သို့သော် တိကျသော သုတေသနပြုချက်များ ယနေ့တိုင်မရှိသေးပါ။ အကယ်၍ ခေါက်ဆွဲခြောက်များတွင် ဖယောင်းများပါဝင်ခဲ့ပါက ထိုဖယောင်းများအား ဖယ်ရှားပြီး လူ့ခန္ဓာကို ဘေးဥပဒ် မဖြစ်စေရန် ခေါက်ဆွဲပြုတ်ရမည့် နည်းလမ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ ရေနွးကို ဆူအောင်တည်ပါ။ ရေနွေးဆူလာသောအခါ ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ရေနွေးအိုးထဲထည့်ပြီး ခေါက်ဆွဲကျက်သည်အထိ ပြုတ်ပါ။ ထို့နောက် ခေါက်ဆွဲဖတ်များကို ဖယ်ထားပြီး ထိုခေါက်ဆွဲပြုတ်ထားသော အရည်များကိုသွန်ပစ်ရပါမည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုရေများထဲတွင် ဖယောင်းများ ပျော်ဝင်သွားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ခေါက်ဆွဲခြောက်တီထွင်ခဲ့သူ Ando သည်လည်း ခေါက်ဆွဲခြောက်စားပြီး အသက် ရှည်ရှည်နေထိုင်သွားခဲ့ပါသည်။ “Ando အခုလို အသက် ၉၆ နှစ်ထိ နေထိုင်သွားနိုင်တာကတော့ ထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပါဘူး၊ သူဟာ အားကစားအနေနဲ့ ဂေါက်ကစားခြင်း တမျိုးတည်းကိုသာ ကစားပြီး ramen ခေါက်ဆွဲကို နေ့စဉ်စားသုံးလို့သာ ခုလို အသက်ရှည် နေထိုင်သွားနိုင်တာပါ၊ သူမကွယ်လွန်ခင် တစ်ရက်အထိ သူဟာ ramen ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို တစိုက်တမတ်စားသုံးသွားခဲ့ပါတယ်” ဟု ကျန်ရစ်သူ Ando၏ဇနီးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုကြစေကာမူ “အစာလည်းဆေး ဆေးလည်း အစာ” ဆိုသည့်အတိုင်း အရာရာကို ချင့်ချိန်စားသုံးမှသာ မိမိတို့၏ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါကိုကုသသည့် ဆေးဝါးများကိုတောင် သူ့အတိုင်းအဆနှင့်သူသောက်သုံးပါမှ ဆေးစွမ်းထက်ပါလိမ့်မည်၊
ရောဂါပျောက်စေနိုင်သည်ဆိုပြီး လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ အလွန်အကျွံသောက်သုံးပါက ဘေးဒုက္ခ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခေါက်ဆွဲခြောက်ကိုသာမက မည်သည့်အစားအစာကိုမဆို မိမိတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တင့်အောင် စားသုံးမှသာ ကောင်းကျိုးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။